2018 Shiinaha horumarinta mishiino caag - Shiinaha Qingdao Makiinado Joogto
Caag PRESS MAKIINADDA
Caag MAKIINADDA qodan
Caag MAKIINADDA EXTRUDER
Caag MAKIINADDA qaboojinta
Qashinka Turos Recycling & hanato Rubber Plant
Caag MAKIINADDA goynta
MAKIINADDA EXTRUDING BALAASTIKADA
BALAASTIKADA MAKIINADDA wax taaj oo kale DURO
2018 Shiinaha horumarinta mishiino caag
Tan iyo markii ay bottoming soo baxay 2016, warshadaha Shiinaha ee mishiino caag sii si loo hagaajiyo ee 2017, iyadoo kobcitaanka double-god ee dakhliga iibka, kororka la taaban karo ee dakhliga ku soo gala dhoofinta, iyo koror weyn oo faa'iidada shirkadaha. Sida laga soo xigtay dhuun warshadaha, shirkadaha taayirrada gudaha iyo dibadda si firfircoon maalgashiga, iyo baahida loo qabo mishiino caag, gaar ahaan-sax sare mishiino caag caaqil, waa hagaajinta. Waxaa la filayaa in industry Shiinaha ee mishiino caag si rasmi ah geli doonaa channel ka sii weynayd ee 2018
dakhliga iibka Rubber shirkadaha mishiino 'kordhayaan si weyn
Sida laga soo xigtay tirakoob ee mishiino caag xubnaha xirfadeed ee Shiinaha Chemical Qalabka Association, 2017, 24 shirkadood oo waaweyn mishiino caag guud dalka gaari iibka dakhliga ee 7,735 bilyan oo yuan, koror ah 11.3%. By eegtahay, ee dakhliga guud ee iibka ah ee warshadaha Shiinaha ee mishiino caag ee 2017 ayaa la filayaa in ay gaaraan 10,65 bilyan oo yuan, koror ah 10.9%. Tani waa koror ugu horeysay sanadkii-on-sano in iibka warshadaha dakhliga tan iyo 2015.
In 2017, heerka hawlgalka guud ee shirkadaha Shiinaha ee mishiino caag ahaa mid sare, iyo dakhliga iibka ee shirkadaha ugu kordheen. Waxaa ka mid ah 24 shirkadood oo la waraystay, waxaa jiray 15 iibka koritaanka dakhliga, 8 hoos u, iyo top 10 dakhliga iibka ahaayeen 6,54 billion yuan, xisaabiyenimo 61,4% wadarta dakhliga iibka, iyo ka-fiirsashada warshadaha kordhay 0.7%. Xoog iyo xoog.
Si weyn u habaysan faa'iidada
Ma aha oo kaliya ayaa dakhliga iibka gaaray kobaca la taaban karo, laakiin waxtarkeedu warshadaha Shiinaha ee mishiino caag ayaa sidoo kale si weyn u kordhay ee 2017 la sannadkii hore marka la barbar dhigo, oo faa'iidada warshadaha ayaa si weyn u kordhay.
Waxaa la fahamsan yahay in 24 shirkadood mishiino caag dhan waa tirsan yihiin samaynta faa'iidada wanaagsan, iyo shirkadaha koritaanka faa'iido xisaabiyo inta badan. Gaar ahaan, faa'iidada shirkadaha mishiino caag ku qoran ayaa si weyn u soo hagaagtay. Tusaale ahaan, 2017, shirkadda gaari faa'iido ah oo ku dhowaad 93 million yuan, halka 2016 ay ahayd khasaare ah 770 million yuan.
Sida ay falanqeeyayaashu warshadaha, ciidanka wadista koritaanka faa'iido inta badan waa korodhka in amarada iyo horumar ah ee wax soo saarka guud ee margin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan in qiimaha alaabta ceeriin ayaa si xad dhaaf sara kacay, oo hoos u xadad faa'iido.
Dhoofinta sarifka lacagaha qalaad oo aad u kordhay
Sida laga soo xigtay tirakoob, 2017, qiimaha bixinta dhoofinta 24 shirkadood mishiino caag in Shiinaha uu ahaa 1,836 bilyan oo yuan, ilaa 32.3% sannadkii-on-sano. By eegtahay, waxaa la qiyaasayaa in wadarta qiimaha dhoofinta warshadaha Shiinaha ee mishiino caag ah US gaari doonto $ 360 million ee 2017, koror of 20% sanad-on-sano.
Sida ay falanqeeyayaashu warshadaha, koritaanka dakhliga sarifka lacagaha qalaad ka dhoofinta waa inta badan ay sabab u tahay xaqiiqada ah in shirkadaha Shiinaha ee taayirada ajiibay US "mucaaradka double" iyo warshadaha taayirrada aasaasay Maraykanka iyo koonfur bari Asia. baahida loo qabo mishiino caag ayaa sameeyay jiro boosaska Champions yar. Waqtigan xaadirka ah, xamaasad ee shirkadaha Shiinaha ee taayirada si ay u dhisaan warshado dibada sii wadaan in ay ferment. Sida laga soo xigtay tirakoob hordhac ah, in ka badan 10 mashruuc oo taayir waa la bilaabo ama la qorshaynayo inuu ku soo bilowdo. Intaa waxaa dheer, ee maal suuqa taayirrada caalamiga ah waa mid deggan, oo waxaa jira mashaariic maalgashi taayirrada dheeraad ah Continental iyo Bridgestone, kaas oo sidoo kale ay dhigaan aasaas for dhoofinta mishiino caag ee Shiinaha. warshadaha ayaa rajaynaysa in dhoofinta Shiinaha ee mishiino caag sii wadi doontaa in la hagaajiyo ee 2018, iyo heerka uu gaarsiisan caalami in la sii hagaajiyo doonaa.
waqti Post: Aug-24-2018
Cinwaanka: # 935, Lingang Industrial Zone
Shiinaha horumarinta mashiinada cuntada